Taorian’ny fisintonana amin’ny ampahany tamin’ny sata afrikàna momba ny zon’olombelona, nihemotra ny demaokrasia ao Benin · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny fisintonana amin'ny ampahany tamin'ny sata afrikàna momba ny zon'olombelona, nihemotra ny demaokrasia ao Benin
Andry iray lasa toherin'ireo governemanta afrikàna sasantsasany
Voadika ny 10 Mey 2020 8:11 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, English, Español, Français
Kaonferansam-paritra momba ny lalàna fanamelohana ho faty any Afrika Andrefana sy Avaratra. Loharano: kaonty flickr Guillaume Colin & Pauline Penot Sary nahazoana alàlana.
Ny 23 Aprily, nanambara ny fisintahany tsy ho ao anatin'ilay antontan-taratasy fanalahidin'ny Sata Afrikàna momba ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka, fanapahankevitra iray mety hitondra mankany amin'ny fameperana ny fahafahan'ireo teratany avy ao Benin tsy hahazo fitsaràna ao anatin'io sehatra io.
Ny zavanisy teo aloha tany amin'ny faritra no entin'ny governemanta ao Benin ho fanamarinana izany
Ny 23 Aprily, nambaran'i Alain Orounla, minisitra mpitondra tenin'ny governemanta ao Benin, fa ny fireneny dia niala tamin'ilay fifanarahana “Sata Afrikàna momba ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka (CADHP), izay sata mamela ny olompirenena iray na ny fikambanana iray hanatona mivantana ny fitsaràna afrikàna momba ny zon'olombelona. Ny CADHP dia miankina amin'ny fifanarahana iray ifanaovan'ny samy afrikàna, napetraka eo ambany fiahian'ny Fiombonambe Afrikàna (OUA) izay nosoniavin'i Benin tamin'ny 20 Janoary 1986. Any Arusha, Tanzania no misy ny foibeny.
Tsipihan'i Orounla, hoy i Arnaud Doumanhoun, mpanao gazety ao amin'ny fraternitebj.info, fa:
… mijanona ho mpikambana ao anatin'ilay Sata momba ny Zon'Olombelona, manohy miasa amin'ny fiarovana, ny fikajiana ny zon'olombelona. Fa fotsiny, tsy iraisan'ilay firenena intsony ilay rafitra na ilay dingana izay mamela ireo olompirenena ho afaka manatona avy hatrany ny Fitsaràna afrikàna momba ny zon'olombelona
Manamarina ilay fialàna i Sévérin Quenum, Minisitry ny fitsaràna sy ny fanaovana lalàna, ao anaty fanambaràna iray izay taterin’il Raymond Falade mpanao gazetin'ny beninintelligent.com:
Efa an-taona maro izao, niteraka ahiahy be ny sasantsasany tamin'ireo fanapahana navoakan'ny Fitsaràna Afrikàna momba ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka, ny antony « dia ireo tsy fandraisana andraikitra goavana nitondra an'i Tanzania, firenena mpampiantrano, sy i Roandà, hisintaka tamin'ny resaka fitarainana ataon'olontsotra sy ireo ONG.
Na izany aza anefa, toa tsy nikatona tanteraka ho an'ireo teratany avy ao Benin ny varavaran'ny Fitsaràna Afrikàna. Noho izany, hoy i Nathaniel Kitti, Filohan'ny Hetsika ho fiarovana ny zon'olombelona ao Benin (MBDH):
Tsy manidy mandrakizay ny fahafahan-dry zareo miditra ao amin'ilay Fitsaràna io fisintahany io, mba hitaky ny fanajàna ny zon-dry zareo izay arovan'ny Sata Afrikàna momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka. Raha izay lazain'ilay fampitàna no hinoana, «araka ny voalazan'ny andininy fah-119.4 ao anatin'ny Fitsipika Anatiny, azon'izy ireo atao ny manolotra fampahafantarana eo anoloan'ny Kaomisiôna Afrikàna momba ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka, ary tsy misy firenena mpikambana afaka hitsivalana amin'izany».
Raharaha mahamenatra ho an'i Benin: ny fanamelohana an'i Sébastien Ajavon
Iray amin'ireo antony azo anazavàna ny fisintahana ampahany nataon'i Benin ny raharaha ara-pitsaràna tany aminy tamin'ny Oktôbra 2018. Tamin'izany fotoana izany, ny Fitsaràna Mpanenjika ny Hadisoana ara-Toekarena sy ny Asa Fampihorohoroana dia nanameloka lehilahy iray, teratany avy ao Benin, mpandraharaha sady politisiana, Sébastien Ajavon hifonja 20 taona sy handoa sazy 5 tapitrisa FCFA ( eo amin'ny 8.400 dolara amerikàna). Mbola tany ivelan'i Benin ilay voaheloka tamin'izay, nandefa didy fampisamborana iraisampirenena nisy ny anarany ny Fitsaràna.
Nanaovan'ireo mpisolovava azy fampakàrana teo anatrehan'ny CADHP ilay didy, izay, tamin'ny Martsa 2019, taorian'ny dingana maro, nandidy ny fitondràna tao Benin hanafoana ilay fanamelohana an'i Ajavon sy handoa aminy, ho fanonerana, ny volabe mitentina 40 lavitrisa CFA eo ho eo (tokony ho 66 tapitrisa dolara amerikàna).
Nametraka fitarainana tany amin'ny CADPH ihany koa i Sébastien Ajavon, noho ny fanilihana ny antokony, ny Fiombonana Sôsialy-Demaokraty, tsy ho afaka hifaninana amin'ireo fifidianana kaominaly voatondro hatao ny 17 Mai 2020. Ho an'io koa, didy nanome rariny ny mpitaraina no navoakan'ny Fitsaràna ka nandidy ny fanjakàna ao Benin hanemotra ireo fifidianana ireo, mandra-pandiniky ny Fitsaràna ny fitarainana napetrak'i Ajavon.
Ampahatsiahivin'i F. Aubin Ahéhéhinnou , mpanao gazety ao amin'ny 24haubenin.info ny fanehoankevitr'i Me Cyrille Djikui, “bâtonnier” ao amin'ny holafitr'ireo mpisolovava ao Benin, izay anisan'ny mpisolovava naroson'ny governemanta ao Benin hiaro azy:
Ho an'ilay “Bâtonnier”, manjakazaka tafahoatra loatra ilay fitsaràna iraisan'ny tanibe, ary mitsabaka “be loatra amin'ny raharahan'ireo Firenena ao ». « Sahala amin'ny hoe tsy manana ny fiandrianany intsony ireo firenena, tsy afaka intsony ny handray fanapahankevitra ho an'ny tenany ireo firenena »
Fihemorana mibaribary ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ao Benin
Toa somary nihemotra kely ny demaokrasia ao Benin hatramin'ny Aprily 2016 nahalàny an'i Patrice Talon ho filoham-pirenena. Rangahy io dia sady politisiana no mpandraharaha mitàna ny laharana faha-15 amin'ireo manankarena indrindra ao Afrika atsimon'i Sahara, ary mihazona fahefana matanjaka koa ao amin'ny fireneny. Ny fanapahankevitry ny governemanta hiala amin'ilay fifanarahana ihany koa dia niteraka fihetsehampo teny anivon'ireo mpikatroka ho an'ny zon'olombelona.
Ho an'i Samira Daoud, talem-paritry ny “Amnesty International”, faritra Afrika Andrefana sy Afovoany:
Lasibatry ny fanafihana ara-pôlitikan'ireo governemanta tsy dia mpanaja loatra ny zon'olombelona indray ny Fitsaràna Afrikàna momba ny Zon'olombelona sy ny Vahoaka. Tamin'io fihetsiny io, simban'i Benin ireo ezaka famoronana rafitra iray azo nitokiana sy nahomby tao amin'ny faritra tamin'ny fiarovana ny zon'olombelona.
Raha naneho hevitra momba ny lalàna n° 2017-20 tamin'ny 20 Aprily 2018 momba ny Kaody nomerika izay ataon'ny andininy sasany ho heloka bevava ny famoahana vaovao diso sy ny hadisoana amin'ny asa fanaovana gazety, avoitran'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana “Amnesty.org”, fa:
Raha kely indrindra, 17 ireo mpanao gazety, bilaogera ary mpanohitra no voahenjika tao anatin'ny taona roa monja araka ny lalàna iray manankery izay ny fepetra sasantsasany maneritery ao anatiny dia manohintohina ny fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovana gazety ao Benin…
Tsy ampy iray volana akory, roa mpanao gazety, Ignace Sossou sy Aristide Fassinou Hounkpevi ary valo hafa mpikatroka an-tserasera no lasibatra farany tamin'ireo fepetra famoretana ao amin'io lalàna io.
Miteny ihany koa momba io ireo mpikatroka ho an'ny zon'olombelona ao Benin mba hanamelohany ilay fanambaràn'ny governemanta. Araka izany, manoratra i Renaud Fiacre Avless, mpahay lalàna sady mpandrindra ny Amnesty International ao Benin fa:
Misaona ny #zon ‘#Olombelona ao amin'ny @229. ny 23 Aprily, nanambara ny fisintahany amin'ny Fanambaràna ny Fifanarahana ho Fananganana ny Fitsaràna Afrikàna momba ny Zon'olombelona sy ny Vahoaka i Benin. Tsy afaka intsony hanatona mivantana ny Fitsaràna Afrikàna ireo teratany avy ao Benin @kikanfr
— Renaud Fiacre Avless (@Avlessifiacre) 24 Aprily 2020
Deo Gratias Kindoho, mpanao gazety ao amin'ny Tranoben'ny Fampielezampeo sy ny Fahitalavitra ao Benin:
Mitohy mitsingidingidina hatrany i #Benin ao anaty filaharan'ny #RSF, faha-113 amin'ny 180. very toerana 17. Tamin'ny fandaharana farany, efa nitsingaona very laharana 12 izy. Tamin'ny andro nahatongavan'i Patrice Talon teo amin'ny fitondrana, faha-78 ny laharan'ny firenena. Nahazo toerana 6 izy tamin'izay fotoana izay, ny Aprily 2016.
— Deo Gratias Kindoho (@dgkindoho) 21 Aprily 2020